Urur looga dhawaaqay Göteborg | Somaliska
Dhawaan ayaa waxaa magaalada Göteborg looga dhawaaqay urur Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Soomali Refugee Victims Organisation kaasoo u jeedkiisu yahay inuu u doodo dadka Soomaaliyeed ee loo diiday sharciga qaasatan kuwa la siiyay waxa loo yaqaano Ut Visa ee la doonayo in dalka laga saaro. Ururkaan ayaa u istaagay in ay ka hortagaan in dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka soo carartay colaada ka jirta dalkii aan dib looga celin dhibaatadaas. Sidoo kale ururka ayaa baaq u diray dhamaan aqoonyahanada Soomaaliyed, ururada xuquuqul insaanka in ay la shaqeeyaan oo ay hor istaagaan in aan dhalinta Soomaaliyeed dib loogu celin dagaalada ka jira dalka. Kama dambeystii ayay ururku baaq u dirayaan dhamaan dadka Soomaaliyeed ee haysta Ut Visa in ay la soo xiriiraan ururka si la isku kaashado, adigoo kala xiriiri kara ururka telfoonada kala ah 0762253822-0734782550. Gudoomiyaha Ururka Rooble Abdulahi Dhaloole
Dhawaan ayaa waxaa magaalada Göteborg looga dhawaaqay urur Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Soomali Refugee Victims Organisation kaasoo u jeedkiisu yahay inuu u doodo dadka Soomaaliyeed ee loo diiday sharciga qaasatan kuwa la siiyay waxa loo yaqaano Ut Visa ee la doonayo in dalka laga saaro.
Ururkaan ayaa u istaagay in ay ka hortagaan in dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka soo carartay colaada ka jirta dalkii aan dib looga celin dhibaatadaas.
Sidoo kale ururka ayaa baaq u diray dhamaan aqoonyahanada Soomaaliyed, ururada xuquuqul insaanka in ay la shaqeeyaan oo ay hor istaagaan in aan dhalinta Soomaaliyeed dib loogu celin dagaalada ka jira dalka.
Kama dambeystii ayay ururku baaq u dirayaan dhamaan dadka Soomaaliyeed ee haysta Ut Visa in ay la soo xiriiraan ururka si la isku kaashado, adigoo kala xiriiri kara ururka telfoonada kala ah 0762253822-0734782550. Gudoomiyaha Ururka Rooble Abdulahi Dhaloole
Runti manta Dhib wayn aya haysta somalida ku dhaqan swedan iyo kuwa kamaqanba…. Muhimadu wa in rayi laisku darsado lagana saro wax wayn o dhaman wax u tara qawsaska kala maqan o ku lana nol africa iyo swedan aniga ahan waxan leyahay mudaharadka waxa ka fican in laisku dayo in la dhaqan galiyo laguna dadalo sidi lo.aqon san kaha baraborkena idinko isku dayaya inad laxarirtan madaxda dawlada somaliya siay waxuga qabtan aqonsiga wana mahadsantihin dhaman dhalinyarata u ordaysa siday ku midayn lahayen qawsarka kala maqan e somalida ah THANKS
Dhalinyaro la doonayo in lagu celiyo Soomaaliya | Somaliska
[…] Abdulahi Dhaloole oo ah gudoomiyaha urur lagu magacaabo Somali Refugee Victims Organisation oo ay ku mideysan yihiin Soomaalida sharci la’aanta ah ee Sweden ku nool ayaa ii sheegay in […]